Fitaovana milina fanariana Die - Fitaovana milina namboarina - Casting Minghe
Vahaolana momba ny milina amin'ny alàlan'ny fanodinana & Cnc Machining
IATF 16949 CERTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny fizarana milina
Ireo singa mekanika no singa fototra mandrafitra ny masinina, ary ampahany tsy afa-misaraka tsirairay mandrafitra ny masinina sy ny masinina. Ilay milina dia mazàna misy ampahany mampita fampitana iray na maromaro (toy ny motera elektrika, motera fandorana anatiny, motera etona) ampiasaina hahazoana angovo ivelany; ny ampahany mpanatanteraka izay mahatsapa ny asan'ny famokarana ny milina (toy ny fitaovana ao amin'ny fitaovana milina), ary mamindra ny fihetsiketsehana sy ny fahefan'ny mpanindry foibe mankany amin'ny faritra mpanatanteraka Ny ampahany amin'ny fandefasana (toy ny fitaovana fampitaovana sy ny famindrana spiral ao milina fitaovana) dia ahitana rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-maso (toy ny rafitra CNC ao amin'ny fitaovana milina) izay miantoka ny asa mifandrindra isaky ny ampahany amin'ilay milina (izany hoe ny masinina dia misy ny ampahan'ny mpamily, ny ampahany ampitana, ary ny ampahany fanatanterahana. Ny refy sy ny fifehezana dia midika). Vaky hatrany ny masinina, ary azo zahana ny faritra samihafa.
Rehefa mamolavola faritra mekanika izy ireo dia tsy tokony ho mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampiasana fotsiny, izany hoe manana ny fahaiza-miasa ilaina, fa koa mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny famokarana, raha tsy izany dia mety tsy hovokarina, na na dia azo amboarina aza izy io dia tsy ilaina ny mihinana azy. asa sy fitaovana.
Zahao ireo faritra mekanika ilaina rehetra toy ny kodiarana, chassis, couplings, spacers, ary nut-bots. Ao ambadik'ity sokajy ity dia manana ekipa injeniera mekanika izay manaiky, mahita ary manamboatra vokatra tsara kalitao indrindra amin'ny fikarohana sy ny fivoarany amin'ny vidiny mahomby. Eto amin'ity sokajy ity dia nanao ny vokatra mekanika ilaina rehetra izahay mba hananganana robots sy masinina CNC.
Mifandraisa amn'ny injenieran'ny partie mekanika eto amintsika anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana singa mekanika mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana vahaolana maty ho azy ary ny fametahana machining cnc ho an'ny fampiharana mekanika marobe, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
1. Shaft faritra: toy ny tohatra, tohatra elektrika, camshafts;
2. Sombin'ny boaty: toy ny boatin-doha, boaty boaty, boaty maotera;
3. Fizarana kapila: toy ny mitondra satroka sy pulley;
4. Fizarana kofehy: toy ny «écran slide»;
5. faritra faritra: toy ny nify mahitsy sy ny varingarina varingarina;
6. Sombin-tsolika sy faritra amin'ny lovia;
2.Nahoana no misafidy anay amin'ny tetikasanao momba ny mekanika
Minghe dia manana traikefa 30 taona mahery manampy ireo mpanamboatra mekanika hamorona singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy milina fanodinana 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasantsasany amin'ireo fizarana mekanika mitaky fatratra indrindra amin'ny resaka habetsahana, ny haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma amin'ny famaritana kalitao mekanika.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, dia manana ny fahaizany manamboatra faritra mekanika amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny fonony miditra amin'ny fonenana lehibe ka hatramin'ny trano lehibe ho an'ny kamio.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra mekanika manokana
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny machining CNC, fanariana fampiasam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ny faritra mekanika namboarina.
Cnc milina mekanika
Fitaovana fanodinana famatsiam-bola
Fitaovana mekanika fanariana fasika
4.Ny fahaizan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra mekanika
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny machining CNC, fanodinam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ireo faritra mekanika namboarina.
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra mekanika:
Ny fahaizan'ny famitana ny faritra mekanika:
Fomba fanodinana mekanika isan-karazany:
Machining mekanika CNC ary fampiharana fanariana maty:
Hazo tohatra, fantsom-by elektrika, camshaft; boatin-doha, boaty boaty, boaty maotera; kapila kapila: toy ny kapoaka mitondra, pulley fehikibo; toy ny visy mihetsiketsika; toy ny nify mahitsy, varingarina varingarina; levers, takelaka Ampahany kilasy;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe an'ny faritra misy ny milina
Misafidiana ny serivisy fanodinana milina tsara indrindra sy ny serivisy fanaovana milina Cnc
Amin'izao fotoana izao, ny milina fanodinana prts milina dia alefa any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerana an'izao tontolo izao. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasan'ny prts masininao.